ह्वात्तै घट्यो अमेरिकी डलरको मूल्य ! – PanchKhal Online
Home/समाचार/ह्वात्तै घट्यो अमेरिकी डलरको मूल्य !
काठमाडौँ, १४ जेठ । नेपाली बजारमा साताको तेस्रो दिन आज मंगलबार अमेरिकी डलरसहित प्राय सबै देशको मूल्य घटेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिमय डर अनुसार आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर १ सय १० रुपैयाँ ९० पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर १ सय १० रुपैयाँ ५० पैसा रहेको छ ।
त्यस्तै युके पाउण्ड १ को खरिददर १ सय ४० रुपैयाँ ७५ पैसा, बिक्रिदर १ सय ४१ रुपैयाँ ५२ पैसा रहेको छ । युएई दिराम १ को खरिददर ३० रुपैयाँ २० पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३० रुपैयाँ ३६ पैसा रहेको छ ।
साउदी रियाल एकको खरिददर २९ रुपैयाँ ५७ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर २९ रुपैयाँ ७३ पैसा रहेको छ । कतारी रियाल एकको खरिददर ३० रुपैयाँ ४६ पैसा छ भने बिक्रिदर ३० रुपैयाँ ६२ पैसा रहेको छ ।
अन्य देशको विनिमयदर तलको तालिकामा हेर्नुहोस्-